Caloosha maku dil dilaacdaa Iyo Dabada -Akhriso waa kuu muhiim | Gaaloos.com
Home » galmada » Caloosha maku dil dilaacdaa Iyo Dabada -Akhriso waa kuu muhiim
Caloosha maku dil dilaacdaa Iyo Dabada -Akhriso waa kuu muhiim
Jeexjeexa ama liidmaha aad tilmaantay waxaa caafimaad ahaan loo yaqaanaa “Strech marks”, waa baro tilmaan u ah in maqaarka uu kaal tagay hadda ka hor, kadibna isku soo laabtay, waxaana la dareemaa markuu qofka caatoobo ama hooyadu markay dhasho.
Ilaahay wuxuu siiyay maqaarka wood jiidmasho “elasticity”, laakiin jiidankaas wuxuu leeyahay xad, hadduu dhaafo xadkaas, maqaarku wuu kala tagaa, waa sida marada oo kale haddii aad safiican u kala jiidin, duntu way kala sikataa oo meeshii kala sikatane maqaarka wuu ka dhex muuqdaa.
Haddii diidiilmaha ay raageen ama midabkoodu uu caddaan yaahy, waxaa lagu baab’in karaa qalliin laser ah, kan oo midabka baab’in karo.
Diidiilmahaan ma ahan wax dhibaato caafimaad qofka u keeni karo, dadka qaarne iyagoo wax daawo ah isticmaalin ayay iska baaba’daa.
MUUQAALKAN HOOSE DAAWO:
Title: Caloosha maku dil dilaacdaa Iyo Dabada -Akhriso waa kuu muhiim